म मेरो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता गर्नुबाहेक केही गर्न सक्दिनथेँ
म मेरो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता गर्नुबाहेक केही गर्न सक्दिनथेँ इन्टरनेटभरि भाइरल भइरहेको यस सन्देशले हाम्रो घर एकदमै खतरनाक स्थानमा रहेछ भन्ने देखाउँथ्यो। यो वास्तवमा हानखउको मध्यभागमै थियो। म बिचरो के गर्न सक्थेँ र मेरो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता गर्नुबाहेक।
बिहिवार, श्रावण १५, २०७७ लुम्बिनी टाइम्स
जनवरी २३, २०२०
त्यो दिन रातिदुई बजेतिर म आफ्नो कम्प्युटर बन्द गरेर अब सुत्नुपर्यो भनेर सोच्दै थिएँ। मैले अचानक कम्प्युटरमा मेरो फोनबाट आएको एक सन्देश देखेँ। यो देखेर मेरो निन्द्रा सबै हरायो। सन्देशमा लेखिएको थियो –‘बस, सब–वे, डुङ्गालगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात र लामो दूरीमा चल्ने यात्रुसेवाका साधनहरू जनवरी २३ तारिखको बिहान १० बजेदेखि बन्द हुनेछन्। यहाँका बासिन्दालाई अत्यावश्यक कारणले बाहेक अन्य अवस्थामा उहान सहर छाड्न निषेध गरिएको छ। यहाँबाट बाहिर जाने सबै रेलसेवा तथा विमानसेवा आदि बन्द हुनेछन्। यी सेवाहरू दोस्रोे सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछन्।’
मैले यो छोटो सूचना पनि दोहर्याई दोहर्याई तीन पटकसम्म पढेँ। अलमल्ल र दुःखित हुँदै मैले मेरी पत्नीलाई पनि ब्युँझाएँ र यो सन्देश सुनाएँ। यो खबरले उसको पनि वाक्य नै हरायो।
हामीलाई थाहा थियो कि यसरी एकाएक यत्रो एक करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उहान सहर बन्द गर्ने निर्णय लिइनुका पछाडि अवश्य पनि कुनै ठूलो कारण हुनुपर्छ। सन् १९०८ सालमा चीनमा जब भयानक बाढी आयो, त्यसबेला सरकारले उहानवासीलाई यस बाढीबाट बचाउन बाढी नै फर्काएर अर्कातर्फ लगाएको थियो। यसबेला हामी उहानवासीले विषयको गम्भीरताबारे पहिलोपटक महसुस गरेका थियौँ।
हामीलाई लागेको थियो कि यत्रो ठूलो एक करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहरमा दुई–चार दर्जन घटनाको कुनै महत्त्व रहने छैन। फेरि स्थानीय खबरले यो महामारी “रोकथाम गर्न सकिने प्रकारको छ र यो मानिसबाट मानिसमा सर्दैन” भनेकाले पनि हामी ढुक्क थियौँ। त्यसैले यसप्रति यति धेरै आत्तिइहालेको र यसतर्फ पूरै ध्यान दिइएको थिएन। यसो त यो महामारीको उद्गम स्थल मानिएको ख्हवानान सी फुड होलसेल बजार मेरो घरबाट नजिकै केवल ६ किलोमिटर वा मोटरमा ६ मिनेटको बाटो पर नै पर्थ्यो। तर पनि सबै कुरा सामान्य नै चलिरहेको थियो।
हामी पहिलेको वर्षमा जस्तै सुपर मार्केटमा गएर किनमेल गर्दै थियौँ, हाम्रा बालबच्चालाई चोङ्सान पार्कमा खेलाउन लाँदै थियौँ अनि आफू पनि त्यहाँ आनन्द मनाउँदै थियौँ। बल्ल यो सूचना आएपछि नै थाहा भयो कि यो भाइरसको प्रकोप उहानका लागि र समस्त देशका लागि समेत अति खतरनाक रहेछ, त्यसैले गर्दा यो भाइरसलाई अन्त फैलन नदिन विज्ञको सुझावअनुसार यो सहरलाई एक मिनेट पनि ढिलो नगरीकन बन्द गर्ने निर्णय लिनु अत्यावश्यक भएको रहेछ।
त्यो रात हामीले ननिदाईकन नै बितायौँ। समाचार कम्प्युटरमा खोज्दै मैले अब यसपछि के होला र भोलि बिहानदेखि हामीले के गर्ने होला भन्ने कुरा सोच्न थालें। विच्याटमा एउटा स्टाटस भाइरल भइरहेको थियो। यसमा लेखेको थियो कि “देशभरिका मानिस सोच्छन् कि उहानलाई निमोनियाँले भेटिसक्यो, तर उहानवासी आफैं भने सोच्छन् कि हानखउ (उहान सहरको राजधानी) लाई निमोनियाँले...” इत्यादि।
इन्टरनेटभरि भाइरल भइरहेको यस सन्देशले हाम्रो घर एकदमै खतरनाक स्थानमा रहेछ भन्ने देखाउँथ्यो। यो वास्तवमा हानखउको मध्यभागमै थियो। म बिचरो के गर्न सक्थेँ र मेरो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता गर्नुबाहेक।
म बिहान ६ बजे उठेँ र हाम्रो भान्सा घर र रेफ्रिजेरेटरमा के–के छ र हामीलाई के–के कुरा चाहिन्छ भनेर हेरेँ। वास्तवमा यसरी सहर नै सबै बन्द हुनु भनेको चानचुने कुरा थिएन र यो चाँडै खुल्ने सम्भावना पनि थिएन। यसैले केही खाना र अन्य आवश्यक कुरा ल्याएर राखिराख्नु नै बुद्धिमानी हुन्थ्यो। मैले घरमा के–के कुरा चाहिन्छ भनेर मेरो फोनमा टिपेँ र एउटा मास्क लगाएर बजारमा सामान किन्न निस्किएँ।
सहरमा सबै सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द हुन अझै केही घण्टा बाँकी नै थियो। तर अहिले नै सहरमा चल्ने गाडीको चाप सधैंको तुलनामा एकदमै न्यून देखिन्थ्यो। सडकमा मानिसहरू यताउता यही बन्दको खबरका कुरा गरिरहेका थिए। यिनीहरू कोही शान्त थिए, कोही निकै उत्तेजित। मजाँदै गर्दा मेरो छेउमा एउटा बस रोकियो। हातमा सरसामान बोकेका, मास्क लगाएका चिन्तित देखिने थुप्रै मानिसहरू बसतर्फ हेरिरहेका थिए। कोही कोही फोनमा चिन्तित मुद्रामा गफ गरिरहेका थिए।
यिनीहरू सबै आफ्नो घर भएको सहर वा बस्तीतर्फ यथाशीघ्र फर्कन चाहन्थे। मैले यिनीहरूको मनको मर्म बुझेँ। वर्ष दिनको कडा मिहिनेतपछि बल्ल आएको यत्रो वसन्त महोत्सवको चाडमा आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो घर फर्कन र परिवारसँग रमाइलो मनाउन को पो चाहँदैनथ्यो होला र ? तर अफसोच! मैले अन्दाज गरेँ, यस सङ्कटको अन्तिम घडीमा तिनले सायदै मात्र उहान छाड्न भ्याउने छन्!
मैले खरिद गर्ने सामानको सूचीमा मास्क र असङ्क्रामक सामग्री प्रमुख महत्त्वमा थिए। औषधि स्टोरमा यी सामान बेच्ने छुट्टै शाखा खोलिएको थियो। यिनको बेग्लै मूल्य सूची थियो– एन ९५ माक्स हरेकको २९ युआन, स्यानिटाइजर एक बोतलको ४६ युआन।
ती सामान वृद्ध मानिसहरूको रोजाइका थिएनन्, किनभने कि त यी एकदमै महँगा थिए कि त यी विल्कुलै नयाँ थिए। असङ्क्रामक झोल र एकपटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्रकारका मास्कहरू नै वास्तवमा उनीहरूका सही रोजाइ थिए। तिनीहरू केही नै मात्र बाँकी थिए तर केही मिनेटभित्रै किन्ने मानिस झुम्मिएर सकिइहाले। मैले पनि चाँडो–चाँडो केही मास्क र केही असङ्क्रामक झोल आदि किन्न भ्याइहालेँ। यी सबै सामानको मैले २०० युआन तिर्नुपर्यो।
यसपछि म खाद्य बजारमा गएँ। तर त्यहाँ लगभग बजारै बन्द जस्तै थियो। केवल केही पसल मात्र खुला थिए। व्यापारीहरूले मलाई बताएअनुसार यो बजार अब दिउँसो १२ बजेदेखि सङ्क्रमणबाट निर्मलीकरण गर्न बन्द हुनेछ र अरू आठ दिनसम्म खुल्ने छैन। मैले केही मुला, प्याज, बन्दागोभी, आलु, लसुनका टुसा लिएँ।
वास्तवमा यी सबै वस्तुहरू भण्डारण गर्न सजिलो पनि थियो। यसपछि मैले केही लामो लामो त्यान्द्रा पारेको सुँगुरको मासु र किमा पारेको मासु किने। यी कुराको मूल्य एकदमै बढिरहेको थियो तर अहिलेसम्म जेनतेन किन्न सकिने नै थियो।
सामान्यतः उहानमा वसन्त चाडको उत्सवमा केही दिन खाद्य बजार बन्द हुन्थ्यो अघिल्ला वर्षहरूमा। त्यसैले मानिसहरूले उक्त चाडका लागि पनि यो चाड आउनुभन्दा केही दिनअगावै आफ्नो पारिवारिक जमघट तथा नातागोता र मित्रहरूसँग रमाइलो गर्न आवश्यक पर्ने प्रशस्त खाद्य सामग्री किनेर राखिसकेका हुन्थे। धेरै परिवारले ससेज, मासुको सुकुटी, सेकाएको सुख्खा माछा, सुरक्षित मासु आदि कुरा पहिले नै बनाएर राखिसकेका हुन्थे। तर यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा सुँगुरको मासुको भाउ अत्याधिक बढेकाले यस्ता कुराको सञ्चिति घरहरूमा पहिलेका वर्षहरूमा भन्दा कम थियो। यीलगायत मैले केही सुक्खा नुडल्स, फलफुल र स्न्याक्स आदि पनि किनेँ। यति सामानले हामीलाई साता दिन अथवा मितव्ययी रूपमा उपभोग गरे १० दिनसम्म पनि पुग्न सक्थ्यो।
केही पछाडि मलाई रेस्टुरेन्टबाट फोन आयो। फोन आएको कारण हामीले नयाँ वर्ष मनाउन गरेको रिजर्भेसन उनीहरूले विषम् परिस्थितिका कारण रद्द गरेको जनाउ दिनु थियो। उनीहरूले मलाई यसका लागि आफू क्षमाप्रार्थी भएको बताउँदै कि त पछिको लागि रिजर्भेसन सार्न कि त पैसा फिर्ता लिन आउन अनुरोध गरे। यसपछि यो कुराको जनाउ दिन मैले आफ्ना नातेदारलाई फोन गरेँ । सबैले सहमति दिए। वास्तवमा, जीवन र स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरू के कुरा छ र?
उहानमा लकडाउन गरिएको दुई घण्टापछि अर्थात् दिनको १२ बजे दोस्रो चक्रपथमा केवल केही निजी मोटर–कार मात्र गुडिरहेका देखिन्थे। अहिले सदाभन्दा आधा नै ट्राफिक कम भइसकेका थिए। आकाश अझ धेरै धुम्म भइरहेको थियो । दोपहरको सुरुमै वर्षा हुनथाल्यो । यसले गर्दा अझ चिसो र उजाड भयो।
– चीनको उहानका बासिन्दा स्यु यानछिङको डायरी
(‘साहस र दृढ संकल्पका कथाहरू : कोरोना भाइरसले बन्दी बनेको उहान’को अंश । यो पुस्तक मकालु प्रकाशन गृहले प्रकाशनमा ल्याएको छ।)
तस्वीरहरु : gettyimages
प्रकाशित मिति: 22 JUly, 2020
म ‘कोरोना युद्ध’ लड्ने सिपाहीहरुको उपचार गर्ने फ्लोरेन्स
म ‘कोरोना’को ड्राईभर
कोरोना भाइरससँगभन्दा बढी समाजका केही व्यक्तिसँग लड्नुपर्‍यो
आइसोलेशन बसुन्जेल मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, घर आएपछि बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो
लुम्बिनी टाइम्स प्रा. लि.
सूचीकृत नं : १३८४/०७१/०७२